सय वर्षे काजी नेपाल हजुरबाको गुनासो–पाठशाला किन मासेको ? | Aaja ko Shiksha
सय वर्षे काजी नेपाल हजुरबाको गुनासो–पाठशाला किन मासेको ?
शिक्षा संवाददाता/सिन्धुकोट (सिन्धुपाल्चोक)
उहाँ देशकै जेष्ठ नागरिकमध्ये एक हुनुहुन्छ । गत कात्तिक ९ गतेबाट ठ्याक्कै उनान्सय पुगेर सय टेक्नुभयो । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–५ सिन्धुकोट निवासी ओगनाथ नेपाल ‘काजी नेपाल’का नामले गाउँमा चिनिनुहुन्छ ।
शताब्दी टेकिएको यो उमेरमा उहाँ निकै नै खुशी देखिनुहुन्छ । नित्य नुहाउँनुहुन्छ, खाना अरूचि पटक्कै छैन । निद्रा मजाले लाग्छ भन्नुहुन्छ । कान थोरै सुनेपनि आँखाले राम्ररी ठम्याउँछ । तर पनि एउटा चिन्ता र रोष उहाँ प्रकट गरिरहनुहुन्छ । त्यो के भने वि.सं. २००६ सालमा खोलिएको गाउँको भाषा पाठशालालाई विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नु । गाउँको माझ घर्तिको चौरमा रहेको त्यो पाठशालालाई पछि तल टारमा ‘स्कूल’का रूपमा सारियो । भाषा पाठशाला छँदा संस्कृतका कौमुदी पढाइन्थे । चण्डि, रुद्रि र वेदका ऋचा घन्काइन्थे । उतिबेलाका पुस्तामध्ये धेरैले पाठशालाबाट दिक्षित हुने मौका पाएका थिए । गाउँका वयोवृद्ध हजुरबा काजी नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘तर तल सारिएपछि पाठशालाको अस्तित्व नै मेटाइदिए । हाम्रो आशा’नि मारिदिए । आखिर पाठशाला नमासिकनै पनि स्कूल चल्न सक्थ्यो होला नि !’ त्यसो त, पाठशाला स्थापना गर्दा आफू र गाउँका साथीहरुले कम्ताको दुःख नखेपेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका सम्झनाका ढोकाहरू एकपछि अर्को खुल्न थाल्छन्, ‘घर्तिको चौरमा रहेको पाठशाला छाउन ऐंसेलुखर्कदेखि तीनपल्टसम्म ढुङ्गा बोकेको काँध र ढाड यही हो ।’
उहाँले हुलाकमा हल्कारा भएर सेवा गर्नुभएको थियो । उसबेला अहिलेको जस्तो पढ्ने जमाना भइदिएको भए आफू पनि माथिल्लै ओहोदामा पुग्न सकिन्थ्यो होला भन्नुहुन्छ । तर, पटक्कै बेखुशी छैन उहाँमा सय वर्षे जिन्दगीप्रति । नेपाल रमाइलो स्मरण सुनाउन थाल्नुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘बाबु ! गाउँको तिरो उठाउँदा टक्सार बोक्ने छुट्टै भरिया हुन्थे । मैले भरियालाई बोकाएर हल्काराको काम गर्या थिएँ ।’
काजी नेपाल हजुरबा एकैसाथ १०–१२ वटा गाईवस्तुका बथान चराउनेमा चर्चित हुनुहुन्थ्यो । ’बाबु ! एउटा गोरू भिरबाट खसेर ठहरै भयो । मलाई साह्रै पीर पर्यो, त्यसपछि गोठालो लाग्नै छोडिदिएँ ।’
यति भनेपछि उहाँले कुराको बिट मार्नुभयो, ‘अहिलेका पुस्ताले पढोस् । ज्ञानगुनका कुरा गरोस् । मेरो आशिष छ–भगवान् नारायणले रक्षा गरुन् !’